VaTrump Voshorwa Nekuronga Kuda Kuvandudza Zvakabuda Musarudzo kuGeorgia
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vari kushorwa zvikuru nevamwe vebato ravo remaRepublicans nevebato rinopikisa remaDemocrats vachinzi vakatyora bumbiro remutemo nekufonera vanoona nezvesarudzo mudunhu reGeorgia kuti vavandudze zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika kuti vanzi ndivo vakakunda.
VaTrump vakakundwa sarudzo naVaJoe Biden vebato remaDemocrats vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 Ndira. Sachigaro wekomiti yedare reparamende reHouse of Representatives inoona nezvekusora kana kuti House Intelligence Committee VaAdam Schiff vebto remaDemocrats vakati VaTrump vari kushandisa masimba avo zvisizvo uye vanogona kumanikidzwa kusiya basa.
VaTrump mumashoko avo neMugovera vaikumbira vakuru vesarudzo muGeorgia kuti vavape mavhoti anoita kuti vanzi vakakunda anova zvuru gumi nerimwe nemazana manomwe nemakumi masere kana kuti 11, 780.
Bepanhau reWashington Post ndiro rakaburitsa nhaurirano iyi yose. Munyori mudunhu reGeorgia VaBrad Raffensperger vakaudza VaTrump kuti izvi hazvaikwanisika uye hapana humbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Georgia yakaverenga mavhoti katatu kunyangwe VaTrump vachiri kuramba kuti vakakundwa musarudzo. VaTrump vakazonyorawo padandemutande ravo reTwitter kuti vainge vakataura naVaRaffensperger avo vavanoti vakaratidza kusada kana kushaya hanya pamwe nekusatoziva zvekuita nehwavari kuti humbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Asi VaTrump vaenda kumatare kanosvika makumi matanhatu asi vachikundikana nekushaya humbowo.
Nemusi weChitatu dare reparamende reCongress riri kutarisirwa kusangana kuti ritambire zviri pamutemo zvakabuda musarudzo.
Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dzinonzi dziri kuda kuramba kutambira zvakabuda musarudzo kunyangwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti uku kupedzera hook padehwe retsindi sezvo zvisingatadzise VaBiden kutora mhiko yekutunamira nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Vatrump vanogona kunge vari kutya kumiswa pamberi pematare kana vasiya chigaro masvondo maviri anotevera.